Dilalka ganacsatada ka soo cusboonaaday xuduudda Somaliya iyo Kenya | Dhacdo
Dilalka ganacsatada ka soo cusboonaaday xuduudda Somaliya iyo Kenya
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa Dowladda Kenya ku eedeeyay inay ka masuul tahay dilalka ka soo cusboonaaday xadka labada dal, ee maalmihii ugu dambeysay loogu gaystay ganacsato Soomaaliyeed.
Afhayeenka Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo, Korneyl Aadan Axmed Xirsi (Aadan Rufle) ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kenya ay dileen ganacsatadaasi.
“Waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dal iyo dibadba in ay Kenya soo celisay xasuuqa shacabka Soomaaliyeed ee barimageedada intooda qiimaha leh. Haddii ay yihiin kuwa Gobolada Jubba (Jubbooyinka & Gedo) iyo haddii ay yihiin kuwii NFD, ay ayada awal ku gumeysaneysay.” Ayuu Afhayeenka shir jaraa’id ku sheegay.
Afhayeenka ayaa Ciidamada Kenya ku eedeeyay inay dileen afar nin oo ganacsato ah, oo uu ugu horeeyo Xaaji Ibraahim Muxumed Cabdille, oo ka mid ahaa ganacsatada waaweyn ee Gobolka Gedo.
“17-kii bishan aynu ku jirno ee May, ganacsade Xaaji Ibraahim Muxumed Cabdille oo ah dadka safriya xoolaha nool ayaa 197 neef oo geela u iibgeeyay Garissa, lacagtana ku soo xawishay Bankiga Ceelqaalow ee NFD. Mar dambe oo lacagtiisa uu baanka ka soo qaatay ayaa waxaa afduubtay Ciidamada Kenya, iyagoo ka afduubay labada Ceelwaaq dhexdooda, waxayna dileen 21-kii bishan oo maalin Jimca ah ku aadaneyd, shalay ayaana meydkiisii laga helay deegaanka Basiira oo hoos-tagga Marsabad, lacagtii uu watayna in ka badan laba boqol oo kun oo dollar waa laga dhacay.” Ayuu yiri Korneyl Aadan Rufle.
Waxa kaloo uu yiri “Xaaji Ibraahim Muxumed Cabdille oo deegaankiisu ahaa Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo waa nin ganacsade ah oo aad looga garanayay Gobolada Gedo iyo NFD.”
Aadan Rufle ayaa yiri “Waa ganacsadihii afaraad oo Soomaaliyeed oo 21-kii illaa 22-kii bishan ay dilaan Ciidamada Kenya, waxaana muuqata inay Kenya soo rogotay ganacsatada Soomaaliyeed iyo waxyaqaankeeda in la xasuuqo, si dadka garashada iyo dhaqaalaha leh looga baabi’iyo, ayadoo aad ogtihiin dhulkeena dhibaatadii ay Kenya ka gaysatay.”
Rufle ayaa ku waramaya in dilka ganacsatada Soomaaliyeed uu xiriirsan yahay deegaanada Jubbaland illaa Magaalada Nairobi.
“Afduubka iyo dilka lagu hayo ganacsatada waa joogto Gobolada Jubba illaa ceelka Nairobi.” Ayuu yiri Rufle.
Tani ayaa ku soo aadaysa, xilli ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Bashiir Maxamed Gaboobe meydkiisa laga helay meel hawd ah oo ku taala Magaalada Mwea, oo qiyaastii 105km u jirta Magaalada Nairobi.
Marxuumka oo haystay dhalashada dalka Mareykanka ayaa la waayay 13-kii bishan, waxayna eheladiisa sheegeen in meydkiisa ay ku yaaliin rasaas iyo nabaro kale oo jirdil ah.
Gaboobe ayaa haatan madax ka ahaa shirkad ganacsi oo ka shaqaysa dhismaha, mana cadda cidda dishay iyo ujeedadii ka dambeysayba, waxaase socda baaritaano ay laamaha ammaanka wadaan.